Idi Best Trolley mobile manipulator Onye nrụpụta na ụlọ ọrụ |Tongli
A na-eji trolley mobile manipulator eme ihe mgbe ibu njedebe dị ntakịrị ma enwere ike dochie ebe ọrụ ahụ.
Dị ka mkpa ọrụ siri dị, bugharịa manipulator enyere aka n'ọnọdụ ọrụ achọrọ maka ịrụ ọrụ.
Dị ka mkpa ọrụ siri dị, bugharịa manipulator enyere aka n'ọnọdụ ọrụ achọrọ maka ịrụ ọrụ.Onye na-ahụ maka ike na-enyere aka nwere ike ịchọpụta ma ọ dị ibu na onye na-eme ihe site na ịchọpụta iko mmiri ara ma ọ bụ njedebe njedebe nke onye na-eme ihe na imezi nrụgide gas na cylinder ahụ, ma gbanwee ikuku ikuku na nguzozi cylinder site na pneumatic. sekit njikwa mgbagha iji nweta ebumnuche nke itule akpaka.Mgbe a na-arụ ọrụ, ihe ndị dị arọ yiri ka a kwụsịrị na ikuku, nke nwere ike izere esemokwu mgbe ngwaahịa na-agbanye.N'ime ebe a na-arụ ọrụ nke ogwe aka robot, onye na-arụ ọrụ nwere ike ibugharị ya n'ọnọdụ ọ bụla, onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịrụ ya ngwa ngwa.N'otu oge ahụ, sekit pneumatic nwekwara ọrụ nchebe na-ejikọta ya dị ka igbochi mmejọ na nkwụsị nke nchebe nrụgide.Otu ihe dị ezigbo mkpa bụ na kreenu nguzozi pneumatic dum adịghị mkpa usoro njikwa eletrọnịkị, ọ chọrọ naanị ikuku abịakọrọ na isi iyi (dabere na ọnọdụ ọrụ) iji rụọ ọrụ, nke dị mfe.
A na-ejikọta manipulator na-enyere aka ike na trolley mkpanaka iji mepụta igwe mkpanaka na-enyere aka.A na-etinye kọlụm manipulator ozugbo na ụgbọ ala mkpanaka, nke nwere ike ịghọta njem dị anya nke ngwá ọrụ ahụ.Onye na-ejide pneumatic nwere ọrụ nke nchebe ikuku ikuku, nke nwere ike igbochi ọrụ ahụ ka ọ ghara ịdaba na mberede.
The mobile njikwa ike manipulator bụ akwụkwọ akụkọ ike na-enyere aka ijikwa ihe na ọrụ na-azọpụta ọrụ.Ọ na-eji akọ na-etinye ụkpụrụ nke nguzozi ike, nke mere na onye na-arụ ọrụ nwere ike ịkwanye ma dọpụta ihe ndị dị arọ n'ihi ya iji dozie mmegharị na ọnọdụ na oghere.Ihe ndị dị arọ na-etolite ọnọdụ na-ese n'elu mmiri mgbe a na-ebuli ha elu ma ọ bụ wetuo ya, a na-ejikwa sekit ikuku iji hụ na ike arụ ọrụ efu efu.
Ogwe aka a na-enye aka na-abụkarị nke onye na-ahụ maka ndị na-eme ihe na-eme ka ọ dị ike, onye na-ahụ maka njikwa ike na-enye aka na nchekwa nchekwa.Ọ nwere njiri mara nke na-abụghị ike ndọda, kpọmkwem na kensinammuo, adaba ọrụ, mma na ịrụ ọrụ nke ọma, wdg, bụ nke dị ukwuu enyemaka nyefe, njikwa, na stacking nke arọ ihe dị iche iche na ụlọ ọrụ, nke mere na iji nweta ezi uche ọrụ. ịzọpụta ọrụ, na mmepụta arụmọrụ.Mmelite nke ogo ngwaahịa na nkwa nke ịdị mma ngwaahịa.
Nke gara aga: kreenụ dabara adaba
Osote: Onye njikwa ike
Weta mkpagharị mkpanaka
Hanging Mobile Manipulator
Robot igwe eji eme ihe